NYU waxay Daahfurtay $ 10 Milyan oo Xarun Cusub oo loogu talagalay Daaweynta Maskaxda ee Magaalada New York • Dawooyinka Inc.eu
Maraykanka - Jaamacadda New York waxay dooneysaa inay balaariso maskaxdeena - laakiin qaab seddex geesood ah oo cusub. Waaxda Maskaxda ee NYU Langone Caafimaadka ayaa qorsheyneysa in la dhiso Xarun loogu talagalay Daaweynta Maskaxda.
Waxay noqon doontaa xarun cilmi-baaris ah oo taageerta cilmi-baarista daaweynta balwadda, xanuunka daba-dheeraada, qabatinka opioid iyo 'jiritaanka jiritaanka' - oo ka mid ah cudurrada kale ee jirka iyo shucuurta - iyadoo la kaashanayo cilmu-nafsiga.
Baarayaasha NYU waxay horeyba ugu lug lahaayeen daraasado ku saabsan daaweynta aalkolada, xanuunada walwalka iyo xanuunada niyadjabka leh psilocybin (maaddada firfircoon ee boqoshaada sixirka) iyo daaweynta kuwa daran PTSS leh MDMA (sidoo kale loo yaqaan ecstasy iyo molly).
Barnaamijkan, oo toddobaadkan lagu dhawaaqay, ayaa sidoo kale hoy u noqon doona Barnaamijka Tababarka Cilmi-baarista ee Cilmi-nafsiga ee NYU ee cusub, kaas oo isku dayi doona in daawada dhimirka laga dhigo mid guud, soo jiidasho dheeri ah loo yeesho, lana kordhiyo tirada khabiirada ku xeel dheer arrimahaas. Xarunta cusub waxaa lagu taageeraa 10 milyan oo doolar oo laga helo deeq bixiyeyaasha.
NYU oo ku taal New York ayaa Daahfurtay Xarun Cusub oo loogu talagalay Daaweynta Maskaxda (afb.)
Hawlgal horumarineed oo casri ah oo maskaxeed
Xarunta waxaa loo aasaasay "Hindisahan wuxuu bixin doonaa jawi ay saynisyahannada, rugaha caafimaadka, laylisyada iyo shaqaalaha kale ay gacan ka geystaan ​​siyaabo macno leh si loo hubiyo in xawaaraha ay abuureen dib u soo nooleynta maskaxda casriga ah la sii wado oo ay sii wado bixinta guulaha caafimaad ee ay taageerayaan sayniska." - ayuu yiri borofisarka cilmu-nafsiga ee NYU Michael P. Bogenschutz, oo noqon doona agaasimaha xarunta.
Taageerayaashu waxay rumeysan yihiin in barnaamijku uusan kaliya kor u qaadi doonin cilmi-baarista caafimaad ee maskaxdu dhiirrigelisay, laakiin sidoo kale wuxuu caawin doonaa kuwa la ildaran "qaar ka mid ah dhibaatooyinka ugu badan ee caafimaadka maskaxda bukaanka," ayaa lagu yiri war-saxaafadeed, isagoo intaas ku daray:
Aad ayaan ugu faraxsanahay waxa mustaqbalku ka bixin doono aaggan. “
Xaruntan ayaa timaadda waqtiga ay sii kordhayaan xiisaha caafimaad ee maskaxda, iyadoo Oregon bishii Nofeembar ay noqotay gobolkii ugu horreeyay ee Mareykanka ee sharciyeeya boqoshaada sixirka. Intaas waxaa sii dheer, Kaliforniya waxay hadda tixgelinaysaa biil xukumi doona aashitada (LSD). Intaa waxaa dheer, xarun caafimaad oo ku taal Manhattan, New York ayaa la furay bishii Ogosto ee la soo dhaafay halkaas oo lagu hagayo ketamine thrips waxaa loo isticmaalaa daaweyn ahaan.
Madadaalo maskaxeed oo firaaqo ah waxay umuuqdaan kuwa caan ka ah sidii hore: Daraasad la sameeyay bishii Luulyo 2020, cilmi baarayaashu waxay ogaadeen in LSD ay si aad ah caan ugu noqotay dadka waaweyn ee Mareykanka taasoo ka dhalatay cudurka faafa ee COVID-19.
LSD badanaa waxaa loo isticmaalaa in lagu baxsado. Oo tan iyo markii adduunku dabku ka holcayo xilligan faafa awgeed, dadku waxay u isticmaali karaan qanacsanaanta daaweynta.
Tani waa waxa ardayga PhD ee Yockey ee Jaamacadda Cincinnati u sheegay Scientific American xilligaas. "Hadda markay COVID u dhacday sidii bambo, waxaan u maleynayaa in adeegsiga ay u badan tahay inuu seddex jibaarmay."
Ilaha waxaa ka mid ah MuggleHead (EN), NYPost (EN), TheGrowthOP (EN)
AmericadaroogadalsdmicrodosingmicrodosinglikahaNew Yorkcilmi baarisboqoshaadamaskaxiyanPTSDdawooyinka caqliga leh
Sida fayraska corona uu suuqa ugu beddelayo daawooyinka sharci darrada ah
Suuqa daroogada sharci darrada ah ee Boqortooyada Midowday wuxuu dhigayaa in ka badan 10 bilyan oo euro canshuur la'aan sanadkii ...
Daawooyinka dhimirka waxaa laga yaabaa inay ka caawiyaan caafimaadka maskaxda maskaxda kadib
Maxkamad ayaa dhowaan gaadhay heer muhiim ah markii la ansixiyay in lagu daaweeyo dadka qaba xanuunka isku-buuqa iyo musiibada kadib ...
Waa maxay daroogada 2C-B maxayna saamaynayaan?
Muddo tobanaan sano ah, khubaro cilmi nafsiyeed ah ayaa ogaa waxa 2C-B ahaa. Ilaa 1997 waxay ahayd ...